Wake wacabanga ukuthi abantu abayisishiyagalolunye kuphela kwabangu-100 baphumelela futhi bacebile? Uma u-yebo, khona-ke kunalokho wenze isinqumo, uma kungenjalo, khona-ke izingane zakho zikhona kule 5%!
Konke kuqala kusukela ebuntwaneni. Ukuthuthukiswa okuvumelanisiwe kwezingane zasenkulisa yasenkulisa kunganikeza imiphumela emihle uma kuhilela ukuthuthukiswa kwentuthuko kokubili ama-hemispheres of the brain. Kwenzeke ukuthi imvelo yathatha ukunakekelwa kakhudlwana kwezwe lesokunxele, isinika ingqondo. Kodwa ngokucabanga kokudala kwakungekho okuningi. Kodwa yiyona intuition ekhuthaza ukuba ukhethe indlela efanele futhi wenze izenzo ezicabangelayo. Ngakho-ke, ukuthuthukisa ingxenye efanele yobuchopho, singakwazi ukufeza imigomo. Ukufunda lokhu ekukhuleni kunzima, kodwa ukufundisa izingane lokhu kuyiqiniso okungenakuphuthelwa! Futhi lokhu kufundiswa yi-arithmetic yengqondo - inqubo entsha ekufundiseni izingane zasenkulisa.
I-arithmetic yengqondo. Izici nezinzuzo
Izici ze-arithmetic yengqondo zihlanganisa ngokuyinhloko ukuthi zenzelwe izingane nezingane ezineminyaka eyi-16 ubudala. Lokhu kubangelwa kokubili izici zesimo esiyingqayizivele kule minyaka, nokuthuthukiswa kwesimo sengqondo. Ubuchopho bezingane eziphakathi kwezingu-4 no-16 buyisipulasitiki futhi bukwazi ukuthola ulwazi ngokujulile.
I-arithmetic yengqondo isekelwe ekufundiseni ingane ukwenza izibalo ezehlukene ngosizo lwama-akhawunti afana no-Soroban no-Abacus. Kodwa lokhu kuyindlela eyodwa kuphela, ngokugcwele, ngosizo lwalolu lwazi, ikhono lobuhlakani labantwana lokuthuthukisa, elikhuthaza ukuthuthukiswa kokuzimela, ikhono lokubonisa isinyathelo, ikhono lokuzihlola ngokwanele.
Nakuba le nqubo isetshenziswe ngisho nangaphambi kukaKristu, kodwa ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe nobuchwepheshe, le nqubo yalahlwa, futhi ize ...
Ngosizo lwe-akhawunti, ingane ithuthukisa amakhono emoto amnandi, futhi ngesikhathi esifanayo ubona imiphumela yemisebenzi ye-arithmetic ebonakalayo. Ngesikhathi esifanayo kunjengokungathi, ukuqeqeshwa kwezixhumanisi ze-neural ebuchosheni, okuthinta kahle ukucabanga: ikhwalithi kanye nesivinini. Futhi lokhu, kunomthelela ekwakhiweni kwezwe lokudla kwesokunxele. Ngokulungiswa kwendabuko kwengane esikoleni, ikakhulukazi i-hemisphere efanele iqala.
Amakilasi e-arithmetic yengqondo angathinteki ngokuqondile i-akhawunti yomlomo, futhi ingane iqala kalula ukucabanga engqondweni, futhi izinombolo ezidijithi ezintathu aziwona umkhawulo.
Ungaphi lapho u-arithmetic yengqondo?
Ngenhlanhla, namuhla kukhona ukukhethwa okukhulu kwezindawo zokuthuthukiswa kwengane zanamuhla ezenza izingane zicele abazali ukuba bazi kangcono indlela yokucabanga kwezingqondo futhi balethe izingane zabo ukuthi zifunde ukuthi zingayisebenzisa kanjani. Othisha abaqeqeshiwe bazokwazi ukudlulisela ulwazi lwezingane ngayinye oluzosiza ukuhlukanisa amathuba awo kanye nokufezekisa impumelelo enkulu esikhathini esizayo.
Ukuze isingeniso sikwanele ukufunda ukubalwa kuya kweshumi - kubalulekile ukusebenza kuma-akhawunti we-Soroban, konke okunye okunye ingane yakho izofunda ngokuqondile ekilasini.
Khumbula - ingane yakho iyingqayizivele futhi iyakwazi kakhulu, futhi ukuhlolwa kwe-arithmetic yengqondo kuzokwazi ukuyivula ngokugcwele kuyo!
Umbukiso wamagnetic Magneticus: izinhlobo, izibuyekezo
Amathonta anomdla. Uhlu lwezithombe ezinhle kakhulu ezinganeni
I-botulinum toxin ku-cosmetology: izinhlobo, izinhlelo zokusebenza, izibuyekezo, isithombe
Udweba kanjani imbuzi - amabili izinguqulo yesithombe